Ny famintinana ny fitaovako avy amin'i Google dia mandeha ao an-trano ihany koa | Androidsis
Find Google my app is a Google app izay manampy antsika hahita ny telefaonantsika very na nangalarina, fampiharana ho raiso an-telefaona ny finday Android. Hatramin'izao, nanome anay toerana eo ho eo amin'ny finday ny fampiharana raha toa ka misy halatra na fatiantoka. Na dia misy aza fanatsarana izao dia azo antoka fa maro ny mpampiasa no tia.
Hatramin'ny Find my fitaovana izao dia ho afaka hahita ny findaintsika amin'ny trano sasany. Ao amin'ity kinova vaovao an'ny fampiharana ity dia efa natolotr'i Google ny mifanentana amin'ny sari-tany. Zavatra izay mampitombo ny fahamarinan'ny fampiharana raha ny fahitana ny findainao.
Amin'izany fomba izany dia ho afaka isika tadiavo ao amin'ny seranam-piaramanidina, toeram-pivarotana ary tranobe lehibe hafa ny telefaona. Ho hitantsika tsara kokoa ny telefaonintsika, satria holazaina ny zavamaniry na ny faritra misy ny telefaona. Hanamora ny fandehan-javatra ho antsika io.
Ity fiasa ity dia efa tonga amin'ny kinova 2.3 an'ny Find my device, izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Play Store. Ireo sarintany anatiny misy amin'ny firenena 62. Na dia antenaina aza fa hitombo tsy ho ela izao tarehimarika izao. Fa any Espana dia ho afaka hampiasa an'io asa io isika.
Mampahafantatra ihany koa ny fanohanana ny Find My Device Biraon'ny asa Android Android ato amin'ity kinova vaovao ity. Ka ny mpampiasa dia hanana kinova amin'ny rindrambaiko manokana ary iray hafa hampiasana asa. Io no hevitra nampahafantarana an'io fampiharana io amin'ny fampiharana.
Tsy misy isalasalana, Tadiavo ny fitaovako aseho ho fampiharana tena ilaina, ankoatry ny serivisy azontsika ampiasaina amin'ny solosaina amin'ny fomba tsotra, mahita finday. Avelanay anao ny rohy fisintomana ho an'ny kinova 2.3, azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tadiavo ny fitaovako avy amin'i Google dia hametraka ny findainao very amin'ny sari-tany anatiny
Amazon Music Unlimited: Makà mozika telo volana amin'ny 0,99 Euros fotsiny